कति समयको भ्रुणको गर्भपतन गर्दा ठीक ? – जीवन शैली
Home /अन्तर्राष्ट्रिय, प्रमुख समाचार/कति समयको भ्रुणको गर्भपतन गर्दा ठीक ?
मियामी । अमेरिकी राज्य जर्जियाका गभर्नरले भ्रुणको ‘मुटुको चाल’ थाहा भएपछि गर्भपतन गराउन निषेध गर्नेसम्बन्धी एउटा नयाँ कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन् । स्थानीय सयमअनुसार शुक्रबार भएको संसद तल्लो सदनमा भएको मतदानमा सांसदहरूले नयाँ कानुन पारित गरेका थिए ।
अमेरिकी हलिउडका कलाकारहरूले गभर्नरको उक्त कदमका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिकामा केही वर्षदेखि गर्भपतनको विषयले राजनीतिक रूप लिएको छ । केही अमेरिकी राज्यहरूले गर्भपतनलाई सीमित गर्ने प्रयास पनि गरेका छन् । गर्भपतनको पक्ष र विपक्षमा पूरै राजनीति बाँडिएको छ ।
जर्जियाको तल्लो संसदले ‘मुटुको चालसम्बन्धी विधेयक’ पारित गरेको थियो । यो कानुन अनुसार भ्रुणको पहिलो मुटुको चाल थाहा पाएपछि गर्भपतन गर्न पाइने छैन । सामान्यतया भ्रुणको मुटुको चाल ६ हप्तामा थाहा हुन्छ । कतिपय गर्भवती आमाहरूलाई ६ हप्तासम्ममा आफ्नो पेटमा बच्चा छ भन्ने समेत थाहा हुँदैन ।
‘जर्जियाले प्राण वा जीवनलाई महत्व दिन्छ । हामी निर्दोष र आवाजविहीनको पक्षमा छौं,’ गभर्नर ब्रायन केम्पले बताए । रिपब्लिकन पार्टीका गभर्नर केम्पले सांसदहरुलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
अमेरिकाको ठूलो मानव अधिकार समूह अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता यूनियन (एसीएलयू) ले जर्जिया राज्यको उक्त कदम विरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने जनाएको छ । ‘गभर्नर केम्पले उक्त विधेयकमा लालमोहर लगाए हामीसँग एउटा मात्र विकल्प छः अदालतको ढोका घच्घच्याउने,’ एसीएलयूका कार्यकारी निर्देशक आन्द्रे योङको भनाइ ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १९७३ मा एक आदेशमार्फत देशब्यापी रुपमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । सन् २०१७ मा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेयता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा दुई जना दक्षिणपन्थी विचारधारा राख्ने न्यायाधीश नियुक्त गरिसकेका छन् । अधिकारकर्मीहरू विगतको त्यस अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउने सम्भावना रहेको भन्दै चिन्तित भएका छन् ।
रिपब्लिकन पार्टी र राष्ट्रपति ट्रम्प गर्भपतनको विपक्षमा छन् । रिपब्लिकन पार्टी र यसका समर्थकहरू ‘जीवनको अधिकार’ को पक्षमा उभिएका छन् भने डेमोक्र्याटिक पार्टी ‘छनोटको अधिकार’ को पक्षमा छन् । अमेरिकाको जर्जिया राज्य फिल्म र टेलिभिजन उत्पादनका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । दर्जनौं हलिउड कलाकारले महिला विरुद्धको यस कानुनका कारण आफ्नो व्यवसाय अन्यत्र राज्यमा लैजाने भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन् ।
कलाकारहरू अलिसा मिलानो, अलेक बाल्डविन, आमी शुमर, बेन स्टिलर, सराह सिल्भरम्यान, मिया फारो समेतले सांसदहरूलाई पत्र लेखी महिलाका लागि सुरक्षित राज्यहरुमा आफ्ना उद्योग व्यवसाय स्थानान्तरण गर्न बाध्य हुने बताएका छन् ।